Anopfuura makore gumi apfuura, paSocial Media Kushambadzira Nyika, ndakasangana neanoshamisa ane moyo wakanaka uye anopenya Emeric Ernoult - muvambi uye CEO weAgorapulse. Musika weSocial Media manejimendi maturusi akazara. Ichokwadi. Asi Agorapulse inobata vezvenhau semakambani anoda kuti ive ... maitiro. Izvo zvave kuomarara uye kuomarara kusarudza chishandiso chakakodzera (kana maturusi) pane zvatinoda. Kune chero munhu (seni) anoedza kubata akawanda maakaundi akarohwa uye